TogaHerer: QORMADII 4AAD EE XUSKA 25 GUUDADA MAALINTA SHUHADADA EE SNM
QORMADII 4AAD EE XUSKA 25 GUUDADA MAALINTA SHUHADADA EE SNM
Qormadii: 4aad Xuska 25-Guurada Maalinta Shuhadada ee SNM
Maalintaa markii aaan Yuusuf Meydal Cumar wareysanayay waxa iyaguna nala joogay Mujaahid Diiriye Cabdillaahi Yuusuf (Diiriye-gaab) iyo Mujaahid Maxamuud Cabdi Xasan (Quulle). Intii uu Yuusuf Meydal Cumar oo qudhiisu ku dhaawacmay maalintaasi I lahaa 1.17 daqiiqadood, saaxiibbadii waxay ka hoos lahaayeen 1.15 daqiiqadood. Waxay ku muransanaayeen laba daqiiqadood. La iskuma hayn maalinta, taariikhda, goobta iyo sannadka midna. Waa Mujaahidka iyo caadadii. Intuba waxay ku xardhanaayeen korkooda. Jidhkooda ayay taariikhda iyo saacadduba ku qornaayeen. Xubnahooda go’ay ee ay hureen ayay ku xusuusanaayeen. Dhiiggooda iyo dheecaankooda ayay maalmaha iyo saacaduhuba dhex socdeen. Ma xigtaa tuduc hore loo yidhi oo halkii Deeqa ma geliyaa saaxiibkay Quulle oo ma idhaahdaa: